Waa kuma ninkii isku qarxiyey Wisil? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Waa kuma ninkii isku qarxiyey Wisil?
June 30, 2021 admin435Leave a Comment on Waa kuma ninkii isku qarxiyey Wisil?
Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay magaca iyo degaanka uu kasoo jeedo is-miidaamiyihii 27-dii June, 2021 isku-qarxiyey saldhiga ciidamadda Dowladda iyo kuwa Galmudug ee degaanka Wisil ee bartamaha Soomaaliya.
Sida ay ku warantay idaacadda ku hadasha afka Al Shabaab, is-miidaamiyaha waxaa lagu magacaabaa “Sagaar Mad Huroow oo ku magac dheeraa Cabdillaahi Jeeri”.
Cabdullahi Jeeri ayaa, sida ku xusan warbixinta ay faafisay warbaahinta xoogaga hubeysan, wuxuu kasoo jeedaa degmada Rabdhuure ee hoostagta gobolka Bakool ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Weerarka ay aroornimadii Sabtiga Al-Shabaab ku ekeysay saldhiga milatariga Soomaaliya ee Wisil ayaa dhimashadda in ka badan 30 ruux iyo dhaawaca tobanaan kale.
Wasaaradda amniga Galmudug ayaa sheegtay in ciidamadda ay ka hortageen duulaanka ay Al-Shabaab ku ekeeyeen xerada Wisil, oo qiyaasti 60 KM dhanka waqooyi kaga beegan magaalo xeebeedka Hobyo.
“Qorshaha Al Shabaab wuxuu ahaa in ay la wareegaan gacan ku haynta Magaalada istiraatiijiga ah ee Wisil, ayna laayaan ciidamadii halkaas ku sugnaa, isla markaana ay qabsadaan gaadiidka iyo hubka saldhigaas yaallay, balse ciidamada geesiyada ah ee Daraawiishta Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa wax kama jiraan ka dhigay riyadii argagixisada,” ayay wasaaraddu ku tiri qoraal ay soo saartey 27-kii June.
Al-Shabaab oo dhankeeda qoraal soo saartey ayaa xustey in ay dishay 30 askari oo ka tirsan Daraawiishta Galmudug isla markaana ay saacado gacanta ku haayeen degaanka halkaasna ku furteen saanad ciidan.
Shirka Golaha Wasiirada Galmudug (Warbixin+Sawirro)